उमेर नपुग्दै पुरुषहरुको कपाल किन झर्छ ? यस्तो छ रोक्ने उपाय
विराटनगर १४ कात्तिक । पाको उमेर हुँदै गएपछि पुरुषहरुको कपाल झर्नु वा तालु खुइले हुनु सामान्य नै मान्न सकिन्छ । तर उमेर नै नपुगी अर्थात युवा अवस्थामा नै आजकाल कपाल झर्ने समस्या आम बन्दै गइरहेको छ ।
यसको कारण पत्ता लगाउन सकेर उपचारमा ध्यान दिए कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भने झर्न रोक्न समेत सकिन्छ । खासगरि बजारबाट प्रोटिन पाउडर किनेर सेवन गर्नेहरुलाई यस्तो समस्या आउने गरेको डर्माेटोलोजिष्ट डा दिपाली भारद्धाजले बताइन् । प्रिटेस्टोरेनको मात्रा बढ्ने भएको कारण कपाल झर्ने गर्छ ।
यस्तै प्रदुषणले गर्दा पनि कपाल झर्ने गर्छ । यस्तै स्ट्रेस (तनाव)को कारण पनि कपाल झर्ने कारण बन्ने गरेको डा. भारद्धाजले बताइन् । डाइट अर्थात सन्तुलित भोजन नहुँदा पनि यस्तो हुने गरेको छ । ज्यादा कफि चिया पिउने गर्दा पनि कपाल झर्ने समस्या हुन्छ ।
कपाल झर्ने समस्या समाधान गर्न के गर्ने ?
कपाल झर्ने समस्याबाट बच्ने भए दैनिक रुपमा कपालमा तेल लगाउन हुँदैन् । जेल जस्ता केमिकल नलगाउने र सिधै सावरबाट नुहाउने भन्दा बाल्टी वा अन्य भाडामा भरेर नुहाउने गर्नु पर्छ ।
सावरको पानी ज्यादै फोर्सको साथ आउने हुदाँ कपाल धेरै झार्न सक्छ । यस्तै प्याजको रस आफैले घरमा बनाएर हप्तामा दुई दिन लगाउने गर्दा पनि कपाल उम्रिने डाक्टर रुपालीले बताइन् । नुहाउँदा हप्तामा तीन पटकसम्म स्याम्पुको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ ।